Jirama sy Jovena Hitsahatra ny fiaraha-miasa
Banky foiben’i Madagasikara Henri Rabarijohn no governora vaovao
Nesorina tamin’ny toerany ny governoran’ny Banky foiben’i Madagasikara Alain Hervé Razafindrainibe ka misolo toerana azy manomboka izao Atoa Henri Rabarijohn.
Tetibolam-panjakana 2020 Tsy hahenoan-dresaka ireo parlemantera
Antom-pivorian’ny parlemanta roa tonta ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2020.
E-Hetra Payment Hanamorana ny fampidiran-ketra
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny “e-hetra Payment” izay fomba fandoavana hetra vaovao amin’ny aterineto.
Fanondranana lamba Tsy maharaka ny filàna i Madagasikara
Haharitra 3 taona ny tetikasa UKTP (United Kingdom Trade Partnership), izay iarahan’ny Vondron’ny Orinasa Afaka haba eto Madagasikara (GEFP) amin’ny minisiteran’ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ary vatsian’ny Vondrona Eoropeanina sy ny firenena Britanika vola.
Vehivavy mpandraharaha malagasy Hatao matanjaka sy mendrika ho an’ny fampandrosoana
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny Le Louvre Antaninarenina indray ny tohin’ny fampiofanana ireo vehivavy te ho matihanina amin’ny fandraharahana atolotry ny EFOI
Ny faran'ny volana septambra teo no nandefa taratasy fangatahana fampitsaharana ny fifanaraham-piaraha-miasan’ny JIRAMA amin'ny orinasa JOVENA ny fitondram-panjakana Malagasy sy ny filankevi-pitantanana.
Fifanarahana izay mahakasika ny fividianan'ny JIRAMA herinaratra amin'ny JOVENA izany. Mba ahafahan'ny orinasa JIRAMA mandoa ny trosany ara-potoana no antony tsy maintsy nirosoana tamin'izao dingana izao. Tsiahivina fa mitotaly 1 200 miliara ariary ny trosa tsy voaloany amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy. Mety ho nahita orinasa ahafahana mividy moramora kokoa eo amin'ny fanjifana solika ataony ihany koa ny JIRAMA. Ny 21oktobra 2015, no nanombohan'ny fiaraha-miasa teo amin’ny roa tonta ary izao mbola mitotongana hatrany izao ny orinasa. Naverimberin’ny tompon’andraikitra hatrany fa fositra mahatonga fatiantoka hatrany ny fividianana solika sy ny fanofana ireo milina ary ny fividianana herinaratra amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy. Fepetra noraisina sy efa nambara ny hanavaozana ireo fifanarahana amin'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra izay mbola an-dalana amin'izao. Andrasana ny ho tohin’ny raharaha, indrindra ny hamalian’ny orinasa JOVENA mahakasika io taratasy fangatahana fampitsaharana ny fifanarahana io.